BAREA MADAGASIKARA: FAMPIVONDRONANA AO LUXEMBURG- LALAO ANDRANA AO MAROC · déliremadagascar
BAREA MADAGASIKARA: FAMPIVONDRONANA AO LUXEMBURG- LALAO ANDRANA AO MAROC
Sport	 3 octobre 2020 .
Hatramin’ny nahafantarana ny datv nomen’nv FIFA ho an’ny lalao ara pirahalahiana 2020 no efa nivonona sy niady hevitra ny Federaslona Malagasy ny Baolina kitra ny hanatanterahana izany. Niroso tamin’ny fitadiavana mpifanandrina ny teknisiana sy ny tompon’andraikitra, ary avy amin’izany no nahitana ny ekipan’ny Burkina Faso.
Naroso sy notapahana teo anivon’ny Komity Mpanatanteraka izany tamin’ny alalan’ny fivoriany, ny 15 septambra 2020. Nisy ny fiaraha-miasa tamin’ny tompon’andraikitra ambony maro samihafa sy ny mpitantana ny Federasiona Marokanina hanamoràna ny fivahinianana any Maroc rehefa fantatra fa tsy azo atao any Portugal indray ny talao.
Rehefa izay dia nifanatona ny FMF sy ny Fanjakana tamin’ny alalan’ny Ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena mpiahy ny federasiona, hijery ny hevitra ahatomombana amin’ny an­-tsakany sy an-davany ny fampivondronana ny eikipam-pirenena. Nanohy ny fikarakarana araka izany hatrany nv teo anivon’ny Federasiona. Na dia teo aza ny fifamahofahoana samihafa sy ny vaovao maro niely dia fantatra fa i Burkina Faso ihany no hifandona amin’ny BAREAn’i Madagasikara.
Ankehitriny rehefa namerina nifampiresaka tamin’ny tompon’andraikitry ny Federasion’ny Burkina Faso sy ny Maroc ny FMF, dia hamafisina fa efa andalam-pilaminana ny fikarakarana rehetra momba izany. Nanaiky ny hanampy amin’ny fanamoràna ny fidiran’ny delegasiona malagasy any an-toerana ny Federasion’i Maroc.
Nv lalao dia atao any El Jadlda ny Alatsinalny 12 otctobra 1020. Marihina fa nohon’ny fangatahana manokan’ny mpanazatra dia hotontosaina ihany koa ny fampivondronana izay atao any Luxembourg ary ihaonana amin’ny klioba Swift Hesperange, ny Zoma 9 oktobra 2020.
lsaorana etoana ny Fanjakana sy ny Ministeran ‘ny Tanora sy ny Fanatanjahantena amin’ny tolo-tanana ataony ho an’ny ekipantsika, hoy ny FMF ao anatin’ny fanambarana nataony, ny CAF sy ny FIFA ary ny Federasiona rahavavy amin’ny fanamorana ny fikarakarana dia isaorana ihany koa noho ny fanampiany antsika. Ny Federasiona Malagasy ny Baolina kitra dia manentana antsika hatrany amin ‘ny firaisankina sy ny fanohanana ny BAREAn’i Madagasikara.
Nanangona : Ony RAMBELO